NKYƐM A EDI KANNNWOM 1-41Ɔtreneeni ne ɔdebɔneyɛfo1Nhyira nka onipa a ontie nnebɔneyɛfo afotu, na onni nnebɔneyɛfo nneyɛe akyi, na onni wɔn a wodi fɛw nso akyi. 2 Na mmom, ɔde anigye di Awurade mmara so, na odwen ho awia ne anadwo nyinaa. 3 Ɔte sɛ nnua a enyin wɔ asuten ho, na ɛsow aba bere a ɛsɛ mu a ne nhaban no nguan. Odi nkonim wɔ biribiara a ɔyɛ mu. 4 Nanso nnebɔneyɛfo nte saa; wɔte sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu. 5 Onyankopɔn bebu nnebɔneyɛfo fɔ, na wɔatew wɔn afi ne nkurɔfo ho. 6 Awurade kyerɛ atreneefo kwan, na ɔbɔ wɔn ho ban. Na nnebɔneyɛfo de, wɔrekɔ wɔn sɛe mu. NA-TWI : Nnwom 1